“Adin’ny favori amin’ny lazon’ady” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nangonin'i JRR il y a 6 mois
Maro ianareo no mifanontany na manontany olona iray manokana momba ny fihodinana faharoan’ny fifidianana ho filoha amin’ny 19 desambra. Iza no handresy ? Iza no favori ? Inona avy ny tombony sy mety ho fahalemen’izy roalahy mpifaninana ?
Fanontaniana marobe no hita sy re. Misy manontany hoe “ahoana iny faminanian’i Nenilava” mandehandeha ao amin’ny tambazotra iny ? Ity fanontaniana farany ity no valiana voalohany. Tsy hanamarina na handiso aho, marihako fa izaho dia tsy mino faminaniana toy ireny. Tsy nanao faminaniana toy izany koa i Nenilava e. Inona tokoa moa no atao hoe faminaniana ? Milaza ny sitrapon’ny Ray, mitarika hanao fandinihantena ary miantso hiverina eo ambanin’ny fitiavan’ny Ray no iraka ataon’ny mpaminany. Ny ankoatr’izay mpaminany sandoka sy antiChrist.
Iza no favori no fanontaniana apetraky ny maro koa. Ny 13 no favori rahefa jerena ny vokatry ny fihodinana voalohany. Nahazo 39% izy. Mitarika izy hatreto. Favori koa izy amin’ny fampielezan-kevitra. Mampiasa hatramin’ny afomanga. Na any Etazonia aza tsy mbola nisy nanao izany. Favori izy raha ny fampanantenana no henoina. Mora raisina sy mahasodoka. Betsaka ireo voasarika. Favori izy amin’ny seho an-dapihazo, sy amin’ny fampitam-baovao. Nandihizany i Madagasikara manontolo. Favori izy amin’ny famafazana sy fandaniam-bola fa dia niaiky avokoa ny maro fa tsy lany laniana ny volany.
Misy koa anefa antony tsy maha-favori azy. Voalohany, fa tsy ny lehibe indrindra amin’ireo antony ireo, ny fitarainany momba ny hala-bato. Mety ho nisy tokoa izany, ary mety ho nanao izany koa izy fa efa navalon’ny tantara izany satria efa mitodika any amin’ny fihodinana faharoa izao ny rehetra. Izy anefa ity mbola mitodika any aoriana toy ny vadin’i Lota. Tsy nahafoy ny harembe tao Sôdôma ka mbola nitodika nijery tany aoriana ny fo sy ny sainy. Vokany: nivadika ho sira ka levon’ny andro sy ny rano. Toy izany koa i 13. Malahelo ny volabe nafafy tamin’ny fihodinana voalohany izay noheveriny fa hampandresy azy avy hatrany.
Tsy favori amin’io harembe nampiasainy io satria miteraka ahiahy. Ireo harembe ireo dia tokony hatao fanadihadiana ny fihaviany sy ny nanangonany azy tao anatin’ny taona vitsy.
Manaraka izay ny tandra vadin-koditry ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Ny voka-pifidianana tamin’ny fihodinana voalohany no ahitana fa tsy tambo isaina ny Malagasy tsy manadino iny nofy ratsy iny. Tanan’izy ireo ho tompon’antoka voalohany sy ny voka-dratsiny ho an’i Malagasy ny 13. Isan’ny maharikoriko ny maro koa ny fiarahany amin’ireo mpivarotena pôlitika izay manaratsy endrika azy. Misy amin’ireo olona ireo aza no miasa mangina ho an’ny mpifaninana aminy.
Momba ny pôlitika ny antony manaraka tsy maha-favori azy. Pôlitika raisina amin’ny heviny ara-bakiteny sy madio : fisahànana ny raharaham-bahoaka. Aim-pirenena sy aim-bahoaka no resahana. Manan-kasina sy mananjina ireny. Tsy kilalao na nofinofy fa tsy maintsy hajaina araka izay hasina sy fahamendrehana izay. Omena lanja koa.
Tsy izany anefa no nitranga. Miami, Las Vegas, Tramway, Paris, tour Eiffel sns. Tsara ilay sary fa tsy mendrika ny Malagasy. Tsy mihoatry ny arivo angamba ny Malagasy no efa tao Miami. Zato amin’ireo raha betsaka no avy ao Toamasina. Amin’ny fahitalavitra no mety nahitan’ny sasany azy. Fehiny : fihantsiana sy fanararaotana ny fahatran’ny olona ny toy izany. Izany hoe tsy manaja ny fahamendrehany. Manana ny fahamendrehany ny olona na mahantra aza.
Ambonin’izany : fitaka ny filazana fa ho vita ao anatin’ny fotoana fohy ireo fampanantenana ireo. Dimy taona ny fe-potoana iasan’ny filoha iray. Voalazan’ny mpikaroka fa 25 na 30 taona eo ho eo raha tsy misy fihatoana ny fandrosoan’ny firenena iray vao mety ho afaka hiala amin’ny toerana A mankamin’ny toerana B izy. Tsy azo itokisana noho izany ny IEM.
Fa ity ny antony iray lehibe indrindra tsy maha-favori ny 13 : matoky sy miantehitra tanteraka amin’ny herin’ny vola izy. Moa va tsy toy ny zanak’Israely nihodina tamin’ny Ray ka nivavaka tamin’i Baal, ilay vongatsarin’omby vita tamin’ny volafotsy sy volamenan’ny Hebrio. Dia toy izany izy. Tsy mahatoky ny tenany izy amin’ny “maha-olombelona” azy tsotra izao fa mahatoky kosa ny “tenany sy ny volany”. Ny fanavahany ireo roa ireo no fanalahidin’ny fahombiazany. Tsy amin’ny 19 desambra ihany fa amin’ny fiainana ankapobeny.
Tokony hampieritreritra lalina azy ny voka-pifidianana tamin’ny 7 nôvambra. Tsy nahaleo ny sarany ny vidiny ka tsy araka ny vola nampiasaina ny valiny satria ny fifidiana tsy vitan’ny vola fotsiny. Midika ho faharesena ho azy ny fiatrehana fihodinana faharoa.
Ny fahalemen’ny 13 anefa tsy mahafaka ny maha-favori azy.
Koa manakory indray àry raha ny 25 no asian-teny ?
Sarotra ihany ny toerana misy azy : faharoa. Nahazo 35% tamin’ny fihodinana voalohany. “Na voalohany, na tsy manao”, no filamatra nahafantarana azy. Faharoa izy izao ka mety misy fiantraikany amin’ny toe-tsainy sy ny mpanara-dia azy izany. Ny Malagasy rahateo sakaizan’ny mpandresy ka asa lehibe no miandry azy hanova ny toe-tsain’ny mpifidy.
Manaraka izany ny fiatrehana ny fihodinana faharoa. Misy ampahany amin’ny mpifidy no mihevitra fa sahirana izy any amin’ny faritra. Tsy hita mazava hatreto ny paikady hisongonany izany afa-tsy ny manao tsidi-pahitra ny faritra toy ny ataony amin’izao fotoana izao. Ireo zanaky ny faritra efa miaraka aminy koa toa tsy mahasarika olona loatra. Maro be anefa ny mpifidy any ambanivolo rehetra any, ary avy any no hiavian’ny vato hampiavaka ny vary amin’ny tsiparifary.
Faharoan’izay ny fampifangaroana ny fivavahana sy ny pôlitika. Fahotana mahafaty ! Tsy afaka aminy ny manararaotra ny pilopitran’ny Fiangonana hisehosehoana. Tsy ankasitrahan’ny mpino izany kanefa moa ny hendry mody voky fa ny adala misesika ihany.
Momba ny fampitaovana indray dia toa mifaninana amin’ny 13 ihany ny an’ny 25. Na hita aza fa somary latsaka kely ny azy dia tsy latsa-danja kosa anefa. Manana angidimby roa hafahany mitsidika toerana maro ao anatin’ny fotoana fohy. Ny mpikatroka tsotra kosa mahavita filaharambe tsy mijanona mandritra ny andro maro mandresy lahatra ny mpifidy. Ny voka-pifidianana tamin’ny fihodinana voalohany no porofo fa manana lazon’ady ny 25. (TTF. Tsiahivina momba ny fitaovana entina mampielyhevitra dia nalaza fa voatazona eny amin’ny ladoany ny fitaovan’ny 25. Voavaha ve ny olana ?)
Momba ny fandaharan’asany : hita fa efa matihanina amin’ny fifidianana izy. Hita koa fa naka lesona tamin’ireo fifidianana efa natrehany tamin’ny 2002 sy 2008, izay samy nandreseny avokoa. Ny fakany lesona amin’ireo lesoka sy tsikera atao momba azy nandritra ny nitondrany anefa no fanalahidin’ny fandreseny amin’ny 19 desambra. Izy no mahalala ny maha-marina na maha-diso ireny. Fa ny fampihavanam-pirenena no lehibe indrindra amin’izany sy handrasana aminy. Lehibe tsy latsa-danja koa ny fanavahany ny fananany sy ny orinasany amin’ny fitantanam-panjakana. Mety hitodika any aminy ny mpifidy tsy tonga nandatsa-bato na ireo nifidy mpifaninana hafa tamin’ny fihodinana voalohany raha toa ka manome antoka mazava sy ankitsi-po ary azo tsapai-tanana momba ireo izy. Sarotra.
Ireo no kandida roa tafakatra amin’ny fihodinana faharoa amin’ny 19 desambra. Ny iray (13) manao dia mianoatra no miatrika izany ka mbola any amin’ny fihodinana voalohany ny masony sy ny fony ary ny sainy. Ny iray (25) hafa efa mandeha mitety vohitra mandresy lahatra ny mpifidy. Paikady roa samy hafa no entin’izy roa ireo hibatàna ny fandresena. Vina samy hafa koa no vohiziny handresen-dahatra ny mpifidy. “Izay alehan’ny tongony no alehan’ny vaton’ny mpifidy amin’ny andro fandatsahambato na fifidianana”, araka ny fandinihan’ny mpikaroka momba ny fifidiana. Inona no dikan’izany? Valiny : araho tsara ny fampielezan-kevitra fa herinandro telo hamaritra ny dimy taona ho avy izany.
Ka iza amin’izy roalahy ary no handresy ? Izay mahazo ny antsasa-manilan’ny vato manan-kery no valiny. Amin’ny alin’ny 19 desambra no hahafantarana izay.